Mudara raTinashe Muchuri: January 2015
Vadomwa vese ava vane mikana yakaenzana yekusumudza mubairo weruremekedzo rwekuva musarudzwanavanhu (Peoples Chice). Kazhinji ruremekedzo urwu rwunonyanya kuyenda kuvaimbi sekuti ndivo vanonyanya kunzwika. Izvi zvinogona kureva kuti vanyori venhau, vanyori vemabhuku nevamwe vose vadavadi havana vatsigiri vakawanda sevatsigiri vevaimbi kana kuti hudavadi hunonyanyozivikanwa navanhu ndehwemimhanzi, kana kuti panoshambadzirwa kuti vanhu vasarudze musarudzwanavanhu havanyatsoziviswa kuti vose vakadomwa vane mukana wakafanana wekusumudza ruremekedzo urwu. Imwe nyaya ndeyekuti zvinogona kunge zviri zvokuti vamwewo vadomwa havana ukama nemikana inowanikwa padandemutande zvokuti havagoni kuzvishambadza kuti vawane hama kana shamwari dzingavasarudzawo.
Gwendo gwuno tati vanosarudza vazive kuti vadomwa vese vane mikana yakafanana. Kune vanoda kusarudza hama neshamwari dzenyu dzakadomwa kuti dzitambire ruremekedzo rwemusarudzwanavanhu.
Kune avo vanotsigira ini chenyu kungodai izvi,
Together we can win the people's Choice Award. This you can do by texting NAMA# TINASHE MUCHURI to 39436
Izvi ndizvo zvinogona kuita wese waanofarira pane vakadomwa kuti wawane ruremekedzo rwemusarudzwanevanhu urwu.
Ndinotenda nerutsigiro rwenyu.
- January 08, 2015 1 comment: Links to this post
Makadii kose-kose kwamuri vanyori venyaya pfupi. Musazoti hamuna kurihwa shoko reshambadzo kubva kuBhabhu Books. Hunzi sedonzo ravo rekusumudzira mutauro waamai, vane hurongwa hwekubudisa muunganidzwa hwenyaya pfupi mururimi rwechiShona. Ndaritambidzawo kwamuri vane hunyanzvi hwehunyora nyaya idzi.
Nguva zhinji tinonzwa vanyori vachichema kuti hakuna uko vanogona kuisawo nyaya dzavo pfupi sezvinoitwa navanyori venyaya pfupi mururimi rwechiRungu. Mukana wavapo waunzwa neveBhabhu. Zvava kwauri munyori.
The final date of submission is Friday, 20th February, 2015.
Send your stories to ignatiusmabasa@gmail.com marked Makore asina mvura in the subject and stating your name, age, gender and contact details.